Jair Bolsonaro wuxuu ka dhigaa majaajiliistaha jirka Brigitte Macron - TELES RELAY
ACCUEIL » aan caadi ahayn • International Jair Bolsonaro wuxuu ka dhigaa majaajillo fiska Brigitte Macron
Jair Bolsonaro wuxuu ka dhigaa majaajillo fiska Brigitte Macron
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo Madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro markii ay ku kulmayeen shir madaxeedka G20 ee Osaka, 28 June 2019. (JACQUES WITT / AFP)
Wasiirka waxbarashada ee dalka Brazil ayaa bartiisa Twitter-ka ku aflagaadeeyay madaxweynaha Faransiiska isagoo ugu yeeray "cretin fursad". Qoraallada laga yaabo inay xukumaan xiisad yar oo udhaxeysa Brasilia iyo Paris.
Madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa ku taageeray axada Facebook's 25 hadal faallo ah oo ku saabsan Brigitte Macron, halka mid ka mid ah wasiirradiisa uu daaweynayay Emmanuel Macron. "Falanqeyn ku saleysan fikirka".
Weeraradan aan loo meel dayin ayaa calaamad u ah inay sii kordhayaan xiisada u dhaxaysa Brasilia iyo Paris, oo maalmihii u dambeeyay iftiimiyey cadaadiskii uu saaray Faransiiska, kaas oo helay shirkii G7, Jair Bolsonaro si tallaabo looga soo horjeedo. dabkii riwaayada ahaa ee ka dhacay Amazon.
Macron wuxuu wacay si uu ugala hadlo Amazon marka loo eego G7, Bolsonaro wuxuu ku eedeeyay "fikirka gumeysiga"
"Ha ceebeyn ninka"
Bolsonaro waxay kaga jawaab celisay post ka qosliyay jaceylka gabadha koowaad ee Faransiiska - oo ka soo muuqatay sawir aan fiicneyn - iyadoo isbarbar dhig ku sameysay tii Michelle Bolsonaro (37 sano), oo iftiimaya maalinta maalgalinta ninkeeda.
"Hada waad fahantay sababta uu Macron u silcinaayo Bolsonaro? " waxaan aqrinayna sawirada labada lamaane ee madaxweynaha. "Waa masayrka Macron, waan qiyaasayaa", ayuu qoraa adeegsadaha, Rodrigo Andreaça.
Ha eedeyn ninka - MDR ["Geerida qosol"] », wuxuu faallo ka bixiyay Madaxweyne Bolsonaro isaga oo tixraacaya dhiggiisa Faransiiska.
Mar la weydiiyay wakaalada wararka AFP in jagadan uu daabacay madaxa gobolka laftiisa, afayeen u hadlay madaxtooyada Planalto ayaa si fudud ugu jawaabay: Annagu kama hadlin. "
Baanka Dhexe wuxuu siiyaa hay'adaha maaliyadeed muddo saddex bilood ah inay dhisaan xarumaha xogta
Hindiya: BJP waxay ku dhawaaqeysaa Barnaamijka Xiriirka Mass ee ku saabsan Jagada Maqaalka 370 | Wararka Hindiya